कर्णालीका तीन स्थानीय तहका विद्यालय खुला « Gaunbeshi
वीरेन्द्रनगर, । वायु प्रदूषण बढेका कारण नेपाल सरकारले शुक्रबारसम्म देशभरका विद्यालय बन्दको आह्वान गरे पनि कर्णालीका तीन स्थानीय पालिकाले भने पठनपाठन जारी राखेका छन् ।
सल्यानको दार्मा गाउँपालिका, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका र सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले शैक्षिक संस्था खुला नै राखेर पठनपाठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । वायु प्रदूषण बढेकाले देशभरका विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नआएको भन्दै यी पालिकाले विद्यालय सञ्चालन गरेका हुन् ।
वायु प्रदूषणले यतातिर समस्या नपारेकाले विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नआएको सल्यानको दर्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नीमबहादुर केसीले बताए । लामो समयसम्म कोभिड–१९ का कारण पठनपाठन प्रभावित भएको तथा वायु प्रदूषणको पनि प्रभाव नपरेकाले गाउँपालिकाका सबै विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको चौकुने गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले पनि आफ्नो पालिकाभित्र वातावरणीय असहजता नभएको भन्दै नियमित विद्यालय सञ्चालन गर्ने बताएको छ । मङ्गलबार पत्र लेखेर शाखाले नगरभित्र यस्तो कुनै पनि खालको वातावरणीय असहजता नभएकाले विद्यालय नियमित सञ्चालन गर्न भनेको हो । रासस
के भयो फेरी प्रचण्डलाई ? सचिवालयले दियो यस्तो जानकारी
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुई दिनका लागि एकान्तवास जाने
निर्वाचित भएकै दिन सुरु भयो राजेन्द्र लिङ्देनको परिक्षा, सपथ ग्रहणमै देखियो यस्तो दृष्य
काठमाडौं । राप्रपाका नव निर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन निर्वाचित भएकै दिनदेखि दुखका दिन सुरु
राप्रपा अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देन विजयी, उपाध्यक्ष र महामन्त्रीमा को को आए ?
काठमाडौ । राप्रपामा वर्षौ देखिको विरासत ढाल्दै युवाको नेतृत्वमा पार्टी पुगेको छ । महाधिवेशनमा
राप्रपा महाधिवेशनमा निर्वाचन भइरहँदा पशुपति शमसेरको निवासवाट आयो यस्तो सबैलाई छक्क पार्ने चिर्कटो
काठमाडौं । राप्रपाको महाधिवेशन हुनुभन्दा अघिल्लो दिन पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो कुनै दावी नभएको